Marodoka – Nosy Be: ravan’ny vehivavy mpanam-bola iray ny harem-pirenena | NewsMada
Marodoka – Nosy Be: ravan’ny vehivavy mpanam-bola iray ny harem-pirenena
Toerana iray, manana ny tantarany ary efa nosokajina ho vakoka any Hell Ville, Nosy Be ny eo Marodoka, moron-dranomasina. Seranan-tsambo taloha izy io ary amin’izao fotoana izao, mahasarika mpizahatany maro i Marodoka, midika, maro dokany na maro mpivarotra teo amin’io toerana io, tany amin’ny taonjato faha-XV. Tamin’izany fotoana izany, nahitana mpifindra monina Arabo sy Karana maro nivarotra entana isan-karazany nampalaza iny faritra iny, toy ny volamena, ny hanitra fanao amin’ny sakafo, sns.
Ankehitriny mbola ahitana taratra ny trano najoron’ireo mpihavy ireo eo amin’io toerana io, sy ny tantara fonosin’izany eo amin’ny lafiny kolontsaina sy ny fihariana. Ankehitriny anefa, mpanan-karena vehivavy iray any an-toerana manao trano eo amin’io toerana io hanafoana tanteraka izany.
Fanorenana eo amin’ny fananam-bahoaka
Ny volana aogositra lasa teo, tompon’andraikitra maro nandefa taratasy tamin’io ramatoa io hanajanona tanteraka ny fananganan-trano ataony eo. Anisan’izany ny avy ao amin’ny fanajariana ny tany, nandefa taratasy nivantana taminy noho ny tsy fanarahan-dalàna momba ny fanorenana ao an-tampon-tanànan’i Nosy Be. Fanamboarana tsy nahazoan-dalana eo amin’ny tanim-panjakana, ny fananam-bahoaka. Tsy misy fanamarinana ara-dalàna na zo hahazo hanao izany io vehivavy io.
Ny volana aogositra ihany, araka ny andinin-dalàna samihafa, nandidy io ramatoa io ny kaominina Nosy Be hampitsahatra avy hatrany ny trano aoriny eo amin’izany seranan-tsambo fahiny, Marodoka, izany. Mitarika any amin’ny fampiharana ny lalàna ny tsy fanarahana ny didy navaokan’ny kaominina.
Mitohy soa aman-tsara ny fanorenana
Ary mbola nanamafy ny didy fandravana izany trano eo Marodoka izany ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany ny 17 aogositra teo. Didy niainga avy amin’ny fahitana tsy fanarahan-dalàna isan-karazany sy ny fahitana ny zava-misy eny an-toerana.
Mahagaga anefa fa toa tsy misy izany didy rehetra izany. Mitohy soa aman-tsara ny fanorenana ataon’ilay ramatoa mpanam-bola ary efa voatafo aza ny trano, ankehitriny. Refesin’io ramatoa io izany ny fanjakana, ary potehiny tsotra izao ny harem-pirenena. Aiza ho aiza ilay hoe tany misy fanjakana ?